यीनै हुन ३ दिदिबहिनि जसले गए रातिको पहिरो’मा ज्या’न गु’माए ! – Kavrepati
Home / समाचार / यीनै हुन ३ दिदिबहिनि जसले गए रातिको पहिरो’मा ज्या’न गु’माए !
admin September 23, 2021	समाचार Leaveacomment 46 Views
निरन्तरको वर्षापछि आए’को प’हिरो’मा परे’र तीन जना’को मृ’त्यु भए’को छ । पहिरोले घर पुरिँदा एकै घरका तीन जना’को मृ’त्यु भए’को हो । गुल्मीमा प’हिरो’ले घर पुरिँदा घरमा सुतिरहेका तीन जना’को मृ’त्यु भए’को छ ।
जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिका–८ थुम्कामा तिलक परियारको घर माथिबाट प’हिरो आई घरकमा सुतिरहे’का छोरीहरु २१ बर्षकी भावना परियार र १४ बर्षका जुम्ल्याहा छोरी गंगा जमुनाको भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायव उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डेले घट’नाबारे जानकारी दिनुभयो ।
राती करिब १ बजे घरमाथिबाट पहिरो आई घर भ’त्कि’दा एउटै कोठामा सुतिरहेका तीनै जना’को पु’रिएर मृ’त्यु भएको र पुरि’एको ला’श स्थानीय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले निकाले’को प्रहरीले जनाएको छ ।
तिलक परियार,उनकी श्रीमती र अर्की छोरी सुरक्षित रहेको र उनीहरुलाई छिमेकीको घरमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
सुजाता माध्यामिक तहको शिक्षा हाँसिल गर्दै बाबु सँगै कपडा सिलाउने गर्दै आएका थिए । दुई छोरी गंगा र जमुनाले तम्घासकै महेन्द्र नमुना माध्यामिक विद्यालय कक्षा ८ मा पढ्दै आएको शिक्षक रोम बिश्वकर्मा बताउँछन्।
प’हिरो’ले पु’रिए’को घर देखि केही मिटरको दूरीमा प्रहरी कार्यालय छ । प्रहरीको कार्यालयदेखि केही दूरीमा नेपाली सेनाको ब्यारेक छ । रा’ति आएको भीषण पहिरोले प्रहरी र सेनाले पनि ढिलै गरि सूचना पाएका थिए । पछि घ’ट’नास्थलमा आउँदा पहि’रो’मा श’व पु’रिसके’को थि’यो ।
तम्घासकै थुम्का टोलमा घडेरी किनेर १२ वर्ष अघि एक तले पक्की घर बनाएर बसेका उनको घरबार अहिले प’हिरो’ले उजा’डिदिए’को छ । वडाका वडाध्यक्ष भरत भलामीले सुरक्षित वस्तीमा उनीहरुलाई स्थानान्तरण गर्न कदम अघि बढाएको बताएका छन् ।
Previous एकै झड्कामा आगनमा खेलिरहेका ४ बच्चाको मृत्युपछि बन्ध्याकरण उल्ट्याएर भाग्यलक्ष्मीले जन्माइन् तीन सन्तान
Next रिजर्भ बस्ने उपासना